Barnaamijyo Isbuucle – STAR FM SOMALIA
Soo dhawaada saaxiibayaal, halkan waxa aan idinkugu soo gudbineynaa Bandhigga Horseed. Barnaamijkan oo ku saabsan dhismaha wadooyinka iyo sida ay...
Soo dhawaada saaxiibayaal, halkan waxa aan idinkugu soo gudbineynaa Bandhigga Horseed. Barnaamijkan oo ku saabsan Muhiimadda ay dadka deegaanka u leeyihiin Dhismaha Garoonka Kubadda Cagta ah...
Saaxibadeenna Starfm, waxa aan halkan idinkula wadaageynaa xayeysiiska barnaamijka Horseed, bandhig diiradda saaraya Dib-u-dhiska, Dib-u-heshiisiinta, Wadahadalka iyo Horumarrada dalka ku tallaabsanayo. Xalqada Soo socota ee barnaamijka...
Soo dhawaada saaxiibayaal, halkan waxa aan idinkugu soo gudbineynaa Bandhigga Horseed. Barnaamijkan oo ku saabsan Muhiimadda ay dadka deegaanka u leedahay Waddada laamiga ah ee laga...